Kooxda Inter Milan oo ku tala jirta inay keensato Kalidou Koulibaly – Gool FM
Raage February 28, 2017
(Milano) 28 Feb 2017 – Inter Milan ayaa la sheegayaa inay gaashaanka adag ee SSC Napoli ee Kalidou Koulibaly kusoo darsatay liiska laacibiinta ay xagaaga doonayso inay safkeeda kusii xoojiso.
Kooxda Nerazzurri ayaa aad ugu bugta inay is adkayso si ay ugusoo noqoto masraxyada sare ee kubadda cagta Talyaaniga iyo Yurub, waxaana horay loola xiriirinayay daafaca Roma ee Kostas Manolas iyo dhiggiisa Stefan de Vrij oo Lazio ka tirsan.
Warqaadka Corriere dello Sport ayaa haatan werinaya in maareeyaha ciyaaraha ee Piero Ausilio uu sidoo kale baarnaadegga kusoo darsaday Koulibaly, waloow uu laacibkan daafaca dhexe ka dheela ay adag tahay in lasoo helo maaddaama Sebtember uun qandaraaskiisa la gaarsiiyay 2021.
Waxaa intaa dheer, Koulibaly ma laha shuruud qandaraaskiisa lagu fasiqi karo, taasoo ka dhigan in Partenopei ay laacibkan ku dalban karto adduun dhan €60m oo euro.
Yeelkeede, waxan oo dhan oo jira, midna Inter waxaa ka go’an inay soo qaadato laacibkan oo ay sahan ugu jirtey kulamadii ugu dambeeyay Serie A iyo xitaa koobkii Africa Nations Cup.
AC Milan oo qandaraaska u kordhinaysa Tababareheeda Vincenzo Montella